समलिङ्गी पाठ खेल – अनलाइन पाठ-आधारित खेल मुक्त
समलिङ्गी पाठ खेल आउँदै छ संग, एक फरक शैली को वयस्क खेल
I bet not गर्ने सबै मानिसहरू समाप्त हाम्रो साइट मा को सुनेका, पाठ-आधारित खेल हो । तर वृद्ध सज्जनहरु पक्कै सम्झना पटक गर्दा कम्प्युटर खेल आउँदै थिए बिना कुनै पनि फैंसी ग्राफिक्स. वास्तवमा, तिनीहरूले आउँदै थिए संग कुनै ग्राफिक्स मा सबै, बाहेक देखि गुंबद pixelated भनेर रूपरेखा गर्न अनुमानित थिए सदृश केही वर्ण. सम्पूर्ण कार्य मा थियो को टाउको gamer, त्यहाँ राखे मार्फत राम्रो लिखित पद वर्णन दृष्य, वर्ण र सबै कार्य ।
तापनि प्रगति प्रौद्योगिकी को ल्याएको अमेरिकी खेल संग अविश्वसनीय ग्राफिक्स, कहिलेकाहीं पुराना कुराहरू छन्, बस रूपमा राम्रो छ । र यस्तो मामला छ लागि पाठ-खेल । संग समलिङ्गी पाठ खेल तपाईं हुनेछ कि एउटा अनुभव हुन सक्दैन मिलान गरेर कुनै पनि अन्य प्रकार को खेल बाहिर त्यहाँ. यो कुरा जोडती कि erotica संग वयस्क खेल मा यस्तो एक रोचक तरिका हो । यी खेल, तपाईं हुनेछ रूपमा खेल को मुख्य चरित्र र तपाईं अनुभव हुनेछ story from his point of view. सबै कुरा जस्तै महसुस हुनेछ एक ग्राफिक उपन्यास, तर तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ अन्तरक्रिया कथा संग, तपाईं को रूप मा हुनेछ decisional शक्ति छ । , तपाईं छनौट गर्न सक्षम हुनेछ जसलाई fuck and how to evolve, आफ्नो चरित्र र मा आधारित आफ्नो निर्णय, कथा फैलाउनु हुनेछ differently. यी खेल आउँदै छन् संग अन्त्य धेरै सम्भावना र तिनीहरूले विभिन्न हेर्न सबैका लागि. If you ' re अनुभव कहिल्यै यस्तो खेल, तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने कुरा को लागि आफ्नो मन झटका हुनेछ. र छ भने तपाईं यस्तो खेलेको खेल अघि, हामी तपाईं आश्वस्त गर्न सक्छन् कि तपाईं खेलेको छैन केहि जस्तै खेल मा यो संग्रह ।
समलिङ्गी परीक्षण खेल पूरा गर्न आफ्नो गहिरो कल्पनामा
संग्रह हाम्रो साइट को शक्ति छ कृपया यति धेरै कट्टर कल्पनामा तपाईं हुन सक्छ कि. र fantasies महसुस हुनेछ अधिक वास्तविक जब तिनीहरूले अनुभव गर्दै छन् हाम्रो साइट मा. किनभने त्यो हो कि खेल हामी सुविधा यहाँ छैन बस को बारे मा सेक्स र यो परिदृश्य मा जो सबै हुन्छ । तिनीहरू पनि बारेमा सबै को भावना तपाईं बाँच्न थियो भने कल्पना कि भइरहेका थिए खेल, के गर्न, तपाईं वास्तविक जीवन मा.
हामी यति धेरै पाठ-आधारित खेल हाम्रो साइट मा, अन्वेषण सबै मुख्य सनक र कल्पनामा कि समलिङ्गी खेलाडी लालसा लागि. तर हामी पनि सेक्स लागि खेल बिसेकषिल र bicurios. र छन् पनि समलिङ्गी खेल हाम्रो साइट मा हो कि उठाइरहेका महिलाहरु रुचि जो केटा-मा-केटा कार्य ।
One of the most popular सनक मा हाम्रो संग्रह परिवार छ taboo. हामी त धेरै परिवार gay sex stories यो संग्रह मा हुन सक्छ जो आनन्द दुवै को दृष्टिकोण देखि पिताजी र एक छोरा वा भाइ । अनि त्यसपछि हामी पनि आउन केही चीनी संग पिताजी कथाहरू, मा जो तपाईं गर्न सक्छन् रूपमा खेल्न twink रहेको शहर वरिपरि looking for sponsors for their lavish lifestyle.
तर हामी पनि केही खेल छ कि संग आउँदै छन् crazier कथाहरू भरिएको, अलौकिक घटनाहरू. हामी आउन संग समलिङ्गी भ्याम्पायर सेक्स कथाहरू संग, केही राक्षस सेक्स stories मा र त्यसपछि हामी पनि केही विज्ञान-fi सेक्स खेल । हामी धेरै अधिक, र तपाईं पत्ता लगाउन मौका तिनीहरूलाई सबै tonight.
खेल्न अनलाइन पाठ मुक्त लागि खेल
यो साइट जो मा तपाईं खेल्न सक्छन् यी सबै खेल लागि उत्कृष्ट छ आज वयस्क gamer. हरेक खेल को हाम्रो साइट मा आउँदै छ एचटीएमएल 5. तपाईं खेल्न सक्छन्, तिनीहरूलाई दुवै मा कम्प्युटर र मोबाइल, र सबै चल्छ सीधा in your browser. कुनै डाउनलोड वा किस्त आवश्यक, र यो लोड समय छ लगभग तुरुन्त. हामी पनि संग आएको टिप्पणी वर्गहरु हाम्रो साइट मा छ, त्यसैले तपाईं अन्तरक्रिया गर्न सक्छन् अन्य खेलाडी । तर बारेमा राम्रो कुरा हाम्रो साइट मा छ कि सबै यो सामग्री हामी सुविधा मा हाम्रो संग्रह गर्न आउँछ तपाईं मुक्त लागि. कुनै paywall रहन र तपाईं बीच यी सबै खेल । , र कुनै प्रतिबंध छन्. तपाईं खेल्न सक्छन् सबै खेल बिना पनि दर्ता र पनि टिप्पणी खण्ड खुलेको छ आगंतुकों लागि. त्यसैले, आनन्द सबै आफ्नो समलिङ्गी fantasies मा खेल संयोजन को विवरण erotica संग अन्तरक्रियाशीलता सेक्स को खेल.